» Artha Main
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ । शुक्रबार छापावाल सुन २ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९८ हजार रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । अघिल्लो दिन छापावाल सुन ९७ हजार ८ सय रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । त्यसैगरि तेजावी सुन पनि २ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९७ हजार...
५ वर्ष राष्ट्र बैंकको सञ्चालक रहनेगरी सिवाकोटी र आचार्यले लिए सपथ, यस्तो छ योग्यता
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका नवनियुक्त सदस्यद्वय चिन्तामणि सिवाकोटी र डा. शंकरप्रसाद आचार्यले सम्माननीय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीज्यूसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच कायमकुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उनीहरूलाई शथप ग्रहण गराए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०८ (१)...
उपकार लघुवित्तका आईपीओधनीले पहिलो कारोबारबाटै ४ गुणाभन्दा बढी कमाउने
काठमाडौ । उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ नेप्समा सूचीकृत भएको छ । संस्थाको ६ लाख ५६ हजार २५० कित्ता प्राथमिक सेयर नेप्सेमा सुचिकृत भएको हो । कम्पनीको सेयरको पहिलो कारोबारका लागि ओपनिङ रेन्ज ४०३.९१ देखि १२११.७३ तोकिएको छ । अर्थात् पहिलो कारोबारमै लगानीकर्ताले ४ गुणासम्म कमाउने भएका छन् ।...
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ४०० ले घटेर ९७ हजार ८०० तोकिएको छ । अघिल्लो दिन छापावाल सुन ९८ हजार २०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ३०० छ । अघिल्लो दिन...
हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लापरबाहीले आज पनि सेयर कारोबार नखुल्ने !
काठमाडौं । हिमालयन र इन्भेष्टमेण्ट बैंकले आफ्ना आधारभुत सेयरधनीको डिम्याट नम्बर समयमा नपठाएपछि १ वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको सेयर कारोबार बिहीबार पनि नखुल्ने संकेत देखिएको छ । ती बैंकले १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका सेयरधनीको नाममात्र पठाएपछि अन्योल भएको हो । मर्जरका कारण रोकिएको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा...
प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्काशन गर्दै हिमालयन रि, बोलायो विशेष साधारण सभा
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको विशेष साधारण सभा जेठ २७ गते हुने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले होटल अलफ्ट, ठमेल काठमाडौंमा दिउँसो २ बजे विशेष सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । सभामा सर्वसाधारणको लागि प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा...
४ कम्पनीका बोनस तथा हकप्रद सेयर नेप्सेमा सुचीकृत
काठमाडौं । नेप्सेमा ४ कम्पनीको बोनस तथा हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको छ । नेप्सेमा आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बोनस सेयर ७ लाख ३१ हजार ९५९.७६ कित्ता, समृद्धि फाइनान्सको हकप्रद सेयर १९ लाख ५७ हजार ३९ कित्ता, सेन्ट्रल फाइनान्सको बोनस सेयर ६ लाख ७८ हजार ३९७.४९५९ कित्ता र साल्ट ट्रेडिङ...
घरेलु तथा साना उद्योगीका लागि नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक
काठमाडौं । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रबाट दिएको सुझावलाई समेत समेटेको नीति तथा...